Jumlada BK5030 cnc mashiinka qafiska toosan ee soo saaraha birta iyo alaab-qeybiye | Lu Young
Mashiinka qashin-qubka BK5032 CNC waxaa loola jeedaa qalabka mashiinka ee adeegsada dhaqdhaqaaqa isu-soo-celinta toosan ee aaladda qotominta si loogu xiro dariiqa muhiimka ah iyo daloolka. Baarka aaladda oo kor uga sii kacaya sariirta ilaa daloolka shaqada, oo leh aaladda la gelinayo, ayaa dhaqdhaqaaqa weyn ka dhigeysa kor iyo hoos inta ay sameyneyso dhaqdhaqaaqa quudinta ee go'an. Waxay ku habboon tahay in lagu farsameeyo marinka godka qaybo waaweyn (sida matoorka).
1. Ku habboon ka baaraandegidda jidadka muhiimka ah, xargaha, iyo godadka indhoolayaasha.
2. Hawlgalinta qaybo qaab-gaar ah leh: Ka shaqaynta marinka godka indhoolaha iyo furaha sinnaanta ee godka indhoolaha waxaa lagu gartaa dhaqdhaqaaqa toosan ee wanka iyo wareegga afaraad ee wareegga.
3. Mashiinka ugu muhiimsan ee adeegga: isku xirnaanta mootada weyn ee adeegga waxay xaqiijin kartaa sixitaanka aan loo meel dayin ee booska oo ay dhammaystiri kartaa farsamaynta shaqooyinka gaarka ah.
4. Wadada tareenka ee Ram dovetail waa xadiid toosan oo toos ah.
Model Cutub BK5030
Maxka Dhererka Slotting ee Ram mm 300
Hagaajinta Safarka Ram mm 75
Tirada dhaqdhaqaaqa Ram n / daqiiqo 30-180
Cabbirka miiska mm 550 * 405
safarka miiska (X, Y) mm 280 * 330
Masaafada udhaxeysa Qadka Axial ee Daloolista Maskaxda
ilaa Jihada-cududda tiirarka mm 505
Masaafada udhaxeysa Diyaarada Dhamaadka ee Hohead Hoaring Hole to Worktable mm 540
X Mashiinka Xuddunta (NM) 6
Y Xuddunta Mashiinka (NM) 6
Dhaqdhaqaaqa Degdega ah X (m / min) 5
Kubadda Kubadda (X) FFZD3205-3 / P4
Kubadda Kubadda (Y) FFZD3205-3 / P4
Howlsocodsiinta Awoodda Gawaarida KW 3.7
Mashiinka daloolka ayaa loo isticmaalay in lagu farsameeyo keywayga gudaha ama godka qulqulka ee wax soo saarka hal-gabal ama yar. Waxa kale oo ay ka baaraandegi kartaa godad siman, laba jibbaaran ama laba geesoodle ah, iwm. Inta badan waxaa lagu beddelaa shiididda ama xoqidda wax soo saarka ballaaran.
Sanduuqyada alwaax-ka-samaynta dhoofinta dhoofinta ayaa laga ilaaliyaa qoyaanka; Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay LCL.
Hore: B635A Qaabaynta maakis
Xiga: CK6140 A 4 saldhig mashiinka korantada cnc lathe bir ah
TCK25 si toos ah yar oo tayo sare leh nooca gaangiska sl ...
VMC1270 saxsanaanta cnc bir fanuc cnc dhagax ...
AWR25 dheeman CNC goynta dheeman for wheel daawaha ...
CK6163 culus culus oo siman 4 qalabka saldhigga cn ...
SM325 qiimaha warshad CNC Swiss nooca lathe ...
vmc1060 biraha warshad 3 dhidibka taagan CNC milli ...